Xuquuqdaada – Qofka magangalyo doonka ah ee aan lahay qof waalid ah ama qofkale oo leh mas’uulyada sharciga ah - Migrationsverket
Dina rättigheter – somaliska
Qaybtan waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabaha ku saabsan xuquuqda ay carruurtu dhammaan ku leeyihiin Iswiidhan iyo taageerada aad adigu xaqa u leedahay markii aad codsanayso magangalyo iyagoon waalidkaa kula socon. Waxaad ka akhrisan kartaa qaar ka mid ah hey’addaha iyo dadka mas'uulka ka ah inay ku siiyaan amniga aad xaqa u leedahay, sidoo kale waxaad si dheeraad ah uga akhrisan kartaa xuquuqda aad u leedahay guri, iskuul, taageero dhaqaale iyo daryeel caafimaad.
In la ahaado ilmo ku nool Iswiidhan
Akhir waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan waxa dhacaya marka aad buuxiso 18 sanno.
Dadka iyo hey’addaha aad adigu la kulmayso
Ka akhri warbixin dheeraad ah oo daawo filimada waxa uu sameeyo qofka mas’uulka ahi External link, opens in new window.
Waxaad u degge­naan kartaa siyaabo kala duwan
Guryaha loogu tala­galay dadka buux­iyey 18 sanno
Ka akhriso warbixin dheeraad ah oo ku saabsan guryaha dadka waaweyn ee ku meel gaarka ah ee Hey'adda socdaalka hey'adda socdaalka
Dugsiga aasaaska ahi waa toban sannadood waxaanu ilmuhu bilaabaa sannadka uu buuxiso lix sano. Sannad dugsiyeedka ugu horreeya, oo loo yaqaan fasalka barbaarinta, wuxuu ka kooban yahay ciyaaro badan iyo hal-abuur si loogu diyaariyo ilmaha dugsiga soo socda. Dugsiga aasaaska ah dhammaan ardaydu waxay bartaan maadooyin isku mid ah.
Ka akhriso warbixin dheeraad ah oo ku saabsan iskuulka oo loogu talagalay dadka magangalyo doonka ah External link, opens in new window.
Ka akhriso warbixin dheeraad ah oo ku saabsan sharciga degganaanshaha oo loogu talagalay dugsiga sare (oo af ingiriis)